Xamar oo saaka xir-xiran | KEYDMEDIA ONLINE
Xamar oo saaka xir-xiran
Qeyb ka mid ah waddooyinka Muqdisho ayaa loo xiray banaan baxyao waaweyn oo maanta ka socda Gobolka Banaadir.
MUQDISHO, Soomaaliya - Dibad-bax lagu taageerayo go’aanka uu Madaxweynaha Soomaaliya Farmaajo ku saxiixay Qaraarkii uu Golaha Shacabka meel mariyay ee ahaa in gobolka Banaadir uu 13 kursi ku yeesho mataalada Aqalka Sare ayaa maanta ka socda magaalada Muqdisho.
Dibad-baxaan waxaa soo qaban qaabiyay Maamulka Gobolka Banaadir oo ku can baxay in ay abuuraan bannaan-baxo ceyn kaan ah si ay u raali galiyaan Farmaajo.
Isgoyska Dhabka, Lambar Afar, Daljirka dhasoon iyo goobo kale ayaa la qisaayaa in la iskuugu keeni doono maamooyin malaamiley u badan.
Dadkaa ka qeyb qaata dibad-baxyada nuucaan ah ee uu Goboka Banaadir qababqaabiyo ayaa u badan haween iyo caruur dan yar ah oo laga soo kaxeeyay xeryaha ay qoyootiga ku yihiin ee aan cidna ku dar yeelin.
Guddoomiya Gobolka Cumar Finish oo goob joog ka ahaa shirarkii Dhuusamareeb 1, 2, 3, iyo kii Muqdisho lagu soo gabagabeeyay 17 Sebteembar, wuxuu og yahay in 13 kursi aysan meel mari doonin, wuxuuna durbaan been ah u tumayaa dadka dan yartaa ee duruufaha maalinlaha ah la daalaa dhacaya.